Ukuphupha umuntu ongasekho ephila? – Buza Noma Yini
Ukuphupha umuntu ongasekho ephila?
Solved291 views August 3, 2021 Amaphupho
Mabuza1.01K	 October 13, 2020 0 Comments
Ngabe kusho ukuthini ukuphupha umuntu ongasekho ephila?
Anonymous Answered question August 3, 2021
uchwepheshe361	 Posted January 9, 2021	 0 Comments
Uma uphupha umuntu ongasekho owumndeni noma ubekade ewumngani nawe, ekutshela ukuthi ulambile noma uyagodola, kudingeka enzelwe umsebenzi. Uma lowo muntu omuphuphile ebekade ewu mngani, uyahamba uyotshela umndeni wakhe bese kuba yibona abamenzela umsebenzi. Uma umuntu ongasekho efika kuwe ngephupho, efika esesimeni esihle, emamatheka futhi ehleka nawe; kukholelwa ukuthi uzoletha izinhlanhla. Uma ubanamaphupho amaningi ngabantu asebadlula emhlabeni basemndenini noma uba namaphupho ongawaqondi, ungaya ukuyobona isangoma bese sona siyakutshela ukuthi kudingekani
Mabuza Selected answer as best May 7, 2021
Lu (anonymous)	 Posted August 3, 2021	 0 Comments
Kungabe kusho ukuthini ukuphupha umuntu wakini ongasekho nibhukuda naye emanzini
Lu Answered question August 3, 2021
Menzi (anonymous)	 Posted May 14, 2021	 1 Comment
Ukuphupha umuntu wakini ongasekho owashona ekhala kakhulu kusuke kunengozi ayibonayo ezayo kunina kungaba isifo or ukugula.
Menzi Posted new comment June 2, 2021
Menzi commented May 26, 2021
Ngesikhathi ngisakhulelwe ngaphupha ngika baba womtwana wethu emakhaya sihleli egcekeni sasuka sangena endlini ewurawondi engathi kunabqntu bakubo, ngabona nobabq wakhe ongasekho emhlabeni wathi angizoxhawulq wqyebukeka ejabulile njeee…ngangiqala ukumubona ephuphweni angimqzi kusho ukuthini????
lungelo majola4	 Posted May 27, 2021	 0 Comments
Ngiphuphe ngilele noBhuti wami kwaqamuka udade wethu saphazamiseka ngalokhe ngimbuza ukuthi amaCondom mecabanga akawabonanga uCc wami kwaqamuka lapho iphupho… ngabe kuchazani?
lungelo majola Answered question May 27, 2021
Nonjabulo myaka4	 Posted May 23, 2021	 0 Comments
Ngiphuphe ngino mama wami ongasekho sise mcimbini womndeni kukuhle nje…kuchaza uktn
Nonjabulo myaka Answered question May 23, 2021